Ganacsade Somali Ah Oo Lagu Dilay Dalka Konfur Afrika. – Bogga Calamada.com
Ganacsade Somali Ah Oo Lagu Dilay Dalka Konfur Afrika.
January 5, 2018 2:48 am Views: 96
Wararka ka imaanaya magaalada Cape Town ee dalka Konfur Afrika waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah magaaladaasi lagu dilay Ganacsada Soomaaliyeed.
Dilkan oo ay geysteen Kooxo Burcad Konfur Afrikan ah waxaa loo geystay ganacsada Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Abuukar Mucalim Xasan waxeyna Kooxaha Burcadda ah ganacsadahaasi ku toogteen afafka hore goobtiisa ganacsi oo ku taala xaafada Khaliija ee magaaladaasi.
Xilliga la dilayay Abuukar waxa uu kasoo adeegtay Magaalada isagoona u soo adeegtay goobtiisa ganacsi,waxeyna Goob-joogayaal xaqiijiyeen in ragga burcad Konfur Afrikanta ah ruuxaasi ganacsadaha ah ay saacado badan ku sugayeen afafka hore ee goobtiisa ganacsi waxeyna ugu dambeyntii rasaas hubiyeen ganacsadaha markii uu furay goobtiisa ganacsi.
Sidoo kale Burcadda dilka u geysatay Abuukar Mucalim Xasan waxey Boobeen goobtiisa ganacsi iyagoona ka qaatay lacago iyo agab fara badan oo yaalay goobtaasi ganacsi.
Maalmo ka hor ayeey sidoo kale kooxo Burcad Konfur Afrikan ah gudaha magaalada Cape Town ugu dileen Labo ruux oo ganacsato Somali ah kuwaasi oo sidoo kale Kooxaha Burcadda ah ay boobeen goobahooda ganacsi.
Labo iyo Tobankii Bilood ee lasoo dhaafay waxaa gudaha dalka Konfur Africa si bareer ah loogu dilay (139) Boqol Soddon Iyo Sagaal Ganacsato Somali ah taasi oo cadeyn u ah dhibaatooyinka adag ee sida joogtada ah ula kulmayaan Somalida ku dhaqan gudaha dalkaasi.